Ganacsatada magaalada Muqdisho oo kashifay Lacago Baad oo Alshabaab ku soo rogeen – Balcad.com Teyteyleey
Ganacsatada magaalada Muqdisho oo kashifay Lacago Baad oo Alshabaab ku soo rogeen
Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdishu ayaa sheegaya inay helayaan telefoonno uga imanaya dad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku amraya inay bixiyaan lacago baad ah oo Al-Shabab ugu yeertay Zako.
Mid ka mid ah ganacsatada oo codsaday inaan magaciisa la sheegin, ayaa sheegay in ganacsatada loogu yeeray degaannada Awdheegle iyo Bariire ee Gobolka Shabellada Hoose, halkaasi oo loogu hanjabay inay bixiyaan lacagaha.
Waxa uu sheegay in ololahan ay Al-Shabaab bilwoday bil ka hor, haatanna ay jiraan lacago badan oo ay ku ururiyeen dadka leh ganacsiga waaweyn iyo kuwa yar-yar intaba.
Ganacsade kale ayaa sina xaqiijiyey in Al-Shabab ay ka ururiyeen ganacatsada ay ugu yar tahay 100 dollar ayna gaadhsiinsan tahay kumaannaan.
Alshabaab ayaa hore lacago uga qaadi jiray ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn, laakiin waxaa sii kordhay ganacsatada Alshabaab la xiriireyso si ay u bixiyaan qaaraan la saaray, iyadoo haddii ay diidaan la kulma xaalado halis ah, taasoo keentay inay si fudud ku bixiyaan kharashaadka ay Alshabaab ka dooneyso.
DHAGEYSO Taliyaha Booliiska Gobolka Banaadir Jeneraal Axmed Xasan Maalin oo VOA la hadlay.
The post Ganacsatada magaalada Muqdisho oo kashifay Lacago Baad oo Alshabaab ku soo rogeen appeared first on Ilwareed Online.
Jeneraal Subagle “AMISOM Al Shabaab iyo Shicibka ma kala saari karto”